galmudugnews.com » Puntland oo lacag been abuur ah ku gubtay Gaalkacyo Home About
Home » WARARKA » Puntland oo lacag been abuur ah ku gubtay Gaalkacyo Puntland oo lacag been abuur ah ku gubtay Gaalkacyo galmudug on
No Comment Views 16204Maamulka gobolka Mudug ee Puntland ayaa maanta meel fagaare ah ku gubay lacag been abuur aheyd oo isugu jirtay doollar iyo shilin Soomaali oo ciidamada booliska ay ka soo qabteen suuqyada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Agaasimaha maaliyadda gobolka Siciid Cali Yuusuf (Gaaddo-yare) ayaa warbaahinta u sheegay in lacagta la gubay oo ku jirtay jawaanno ay gaareysay 50 milyan oo shilin Soomaali ah iyo 130,000 oo doollar oo been abuur ah.
Agaasimaha wuxuu sheegay inay jiraan dad doonaya inay dhacaan hantida ummadda, kuwaasoo uu ku eedeeyay inay lacag been abuur ah ku sameeyaan deegaannada maamulka Puntland iyo guud ahaan gobollada dalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland, Maxamuud Yuusuf Tigey oo isna ka hadlay goobta lacagta lagu gubay ayaa uga digay ganacsatada gobolka inay isticmaalaan lacagta been abuurka ah, oo uu sheegay inay keeni karto sicir barar ku yimaada maciishadda haddii ay suuqyada gasho.
Maxamuud Yuusuf ayaa ka codsaday shacabka iyo ganacsatada gobolka inay ka digtoonaadaan lacagtaas been abuurka ah.
Maamulka gobolka Mudug ee Puntland ayaa horraantii sanadkan uga digay shacabka iyo ganacsatada lacag shilin Soomaali ah oo been abuur ah, taas oo la sheegay in ay soo gashay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21021 hitsContact US - 19683 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 15802 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 15525 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 13970 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 13927 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 13832 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 13788 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 11843 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11809 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 11757 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11539 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11510 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11367 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11279 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11173 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11099 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11066 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 10896 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 10560 hitsKhaliif weyne oo Qaar ka mida beelaha Sacad caayay- Yaab - 10386 hitsWarar yahanka kooxda Realmadrid Cristiano Ronaldo oo jebiyay rikoorka gool dhalinta Horyaalka Spain - 10366 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 10083 hitsXaaskii Adan Xaashi Ceyrow oo joogta Pakistan. - 10036 hitsDaawo xiisadii ka dhalatay heshiiskii Ankara oo cirka isku shareertay -Wasiirkii Khaarijiga TFG oo cambaareeyay - 9795 hits Home About